Ahan Shetty Oo Beryahan Waqti Wacan La Qaadanaayo Gabadha Jaceylkiisa Ah Tania Shroff - Hablaha Media Network
Ahan Shetty Oo Beryahan Waqti Wacan La Qaadanaayo Gabadha Jaceylkiisa Ah Tania Shroff
HMN:- Jilaaga caanka ah Suniel Shetty wiilkiisa Ahan Shetty dhawaan ayuu Bollywood-ka kusoo biiri doonaa waxaana soo caan bixin doono filim sameeye iyo soo saare Sajid Nadiadwala oo uu la gaaray heshiis sedex filim inuu u sameeyo.
Hadaba Ahan Shetty noloshiisa fanka Hindiya ma ahan mid haatan saameyn leh madaama weli uusan bilaabin duubista filimkiisa kowaad oo bilaaban doonto bisha September ee sanadkaan.
Balse Ahan Shetty wuxuu hadal heyn ku sameenayaa inuu beryahan waqti wacan la qaadanayo gabadha jaceylkiisa ah Tania Shroff ee dhanka Model-ka caan ku ah.
Tania Shroff magaalada London ayay wax ka barataa balse haatan fasaxa gu’a dartiis ayay magaalada Mumbai dib ugu soo laabatay.
Waxaana la arkaayay maal mihii ugu dambeeyay Ahan Shetty gaarigiisa oo marwalbo yaalo banaanka guriga Tania Shroff magaalada Mumbai ka dagan tahay.
Suniel Shetty ayaa xili hore wargeyska Filmfare wax ka weydiiyay inuu la socdo wiilkiisa Ahan Shetty gabadha uu saaxiib la yahay.
Suniel Shetty wuxuu markaas ku jawaabay “Aqoon ayaan u leeyahay Ahan saaxiibtiis, waa wiil dhalinyar wuxuuna yeelan doonaa saaxiibo kala duwan oo noloshiisa soo mari doonaan, laakiin waxaan u sheegay inuu xushmad iyo tigxalin u muujiyo gabadha noloshiisa hada qayb ka ah”